माइक्रो परिवर्तन के हो र यो कसरी खतरनाक छ? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी
प्रकाशित 03.04.2021 03.04.2021
माइक्रो परिवर्तन के हो र यो कसरी खतरनाक छ?
आधुनिक संसार असंख्य प्रलोभन र प्रलोभनहरूले भरिएको छ, त्यसैले कुनै नयाँ कुराको प्रतिरोध गर्न अत्यन्त गाह्रो हुन सक्छ। यो पनि विपरीत लिंग संग सम्बन्ध मा लागू हुन्छ।
एक मानिसकी श्रीमती छ र खुशी खुशी विवाह भएको छ भने, त्यहाँ एक धेरै सम्भावना छ कि अर्को बारे सोच्न सक्छ, जो केहि मिनेट को लागी एक नयाँ साथी बन्नेछ। वैज्ञानिकहरू यस अवस्थाको बारेमा सक्रिय छलफल गरिरहेका छन्, किनकि यसलाई विचार गर्न सकिन्छ माइक्रो परिवर्तन वा वास्तविक देशद्रोह।
यदि एक महिलालाई दिनहुँ धेरै प्रशंसा दिइन्छ, र बदलामा महिलाले विपरीत लि of्गका प्रतिनिधिहरूलाई ध्यान दिन्छ भने, के यो वास्तविक विश्वासघात मान्न सकिन्छ? यसै कुरा तल छलफल गरिनेछ।
ठगीलाई कानूनी जीवनसाथी वा पार्टनर नभएको व्यक्तिसँग घनिष्ठ सम्पर्क राख्नु भनिन्छ। नतिजा स्वरूप, केही दायित्वहरु को उल्लंघन गरीन्छ।
"माइक्रो-परिवर्तन" को रूपमा यस्तो अवधारणा धेरै लामो पहिले देखा पर्दैन, तर अझै पनि यसको वास्तविकता मा असंख्य विवादहरु छन्। यो शब्दले अन्य व्यक्तिसँग गोप्य सञ्चारको उपस्थितिलाई ग्रहण गर्दछ, र यो ध्यानपूर्वक लुकाइएको छ। त्यस्ता सम्बन्धहरू केवल रोमान्टिक वा, आत्मीय (प्रेमी) हुन सक्छ।
कहिलेकाँही तिनीहरू त्यस्तो भावनात्मक लगावको उदय गर्न अग्रसर हुन्छन् जससँग वास्तविक सम्बन्ध हुँदैन। यो संचार वस्तुतः बाहिर लैजान सकिन्छ, कि सामाजिक नेटवर्क वा विशेष साइट को माध्यम बाट। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि त्यहाँ कुनै शारीरिक सम्पर्क छैन (त्यहाँ कुनै मालकिन वा प्रेमी छैन)। एकातिर, यस्तो लाग्न सक्छ कि सूक्ष्म परिवर्तन पूर्ण रूपमा हानिरहित छ र विशेष ध्यानको आवश्यक छैन। तर जीवनमा यो यसको कारणले गर्दा विवाहित जोडीहरू ठूलो संख्यामा टुक्रिन्छन्।
माइक्रोचेन्जका निम्न संकेतहरू अब ज्ञात छन्
विपरीत लिंगको व्यक्तिसँग लगातार गोप्य पत्राचारको उपस्थिति;
यस सम्बन्धमा वास्तवमा आकर्षक छ जो कोहीसँग एक घनिष्ठ कुराकानी सञ्चालन;
एक अपरिचित संग अवस्थित सम्बन्धहरूको छलफल;
वास्तविक पार्टनरको रूपमा धोखा दिन्छ, र यो अन्जानमा हुन्छ;
एक राम्रो व्यक्ति काल्पनिक नामको साथ लेखिएको छ।
संकेत गरीएको संकेतलाई धन्यवाद, सम्बन्धमा microchanges को उपस्थिति को तथ्य स्थापित गर्न सम्भव छ।
यदि पार्टनरमा यस्तो रोगको उपस्थिति पहिचान गर्न आवश्यक छ भने, त्यहाँ यससँग कुनै विशेष समस्याहरू हुनेछैनन्। वास्तवमा, संकेतहरू पूर्ण रूपमा विश्वासघात (प्रेमी (हरू) को उपस्थिति) को समान छन्।
उदाहरण को लागी, एक पुरुष वा महिला को नाटकीय रूपमा उनीहरुका बानी ब्यबहार परिवर्तन गर्न को लागी असामान्य छैन, र वास्तविकता मा मात्र होइन, तर एक सामाजिक नेटवर्क मा। हामी कपडाको शैलीमा परिवर्तनहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौं र व्यक्तिगत पृष्ठमा असंख्य पोष्टहरू लेख्दैछौं। यदि अर्को आधा नजिकै छ, तब मोबाइल उपकरणको स्क्रीन तत्काल अफ हुन्छ वा कम्प्युटरमा ट्याबहरू बन्द हुन्छन्। यस कारणका लागि, सम्बन्ध मा सम्भावित समस्याहरु बारे बिभिन्न विचार उत्पन्न हुन थाल्छन्। मनोवैज्ञानिकहरूले विश्वासघातको आरोपहरू तुरुन्त फाल्ने विरुद्ध सल्लाह दिन्छन्।
के वास्तविक सम्बन्धमा कुनै खतरा छ?
प्रायः त्यस्ता संकेतहरू अवस्थित जोडीहरूमा देखा पर्दछ, त्यसैले तपाईंले समयमै सम्भावित समस्यामा ध्यान दिन आवश्यक छ। यदि एक व्यक्ति भावनात्मक पत्राचार लुकाउँछ, तब यो उसको आत्मा जोडीको धोका र एक बाहिरी मानिस संग नैतिक सन्तुष्टि को खोज को संकेत गर्दछ। लगातार धोखाको साथ, माइक्रो-परिवर्तनको एक सुलभ लुकाइन्छ नोट, त्यसैले केहि बढी विचारहरू देखा पर्न, कि, आभासी दुनियाबाट यथार्थमा यस्तो सम्बन्ध सार्न।
केवल चुप लागेर अर्को आधा यस्तो खेलहरू रोक्न सिफारिस गरिँदैन। अन्यथा, यसले एक मालकिन (हरू) को सम्भावित देखा पर्दछ र विवाहित जोडीको विनाश गर्दछ।
माइक्रोचेन्जेससँग लड्ने तरिकाहरू
सर्वप्रथम, तपाईंले आफ्नो पार्टनरलाई निष्कपट कुराकानीमा ल्याउनुपर्नेछ र के अनुमति छ त्यो सीमाको सीमा तय गर्नु आवश्यक छ, त्यो उहाँलाई समर्पण गर्नुहोस् के स्वीकार्य हुनेछ र के हुँदैन। केही व्यक्तिले त्यस्ता पत्राचारलाई साधारण गलतफहमीको रूपमा लिन सक्छन्, जबकि अन्यले यसलाई प्रियजनको रूपमा वास्तविक विश्वासघातलाई श्रेय दिन्छन्। यो आभासी सञ्चार सञ्चालन गरिएको छ जसको साथ एक साथीको लागि छ भावनाहरु को डिग्री खोज्न महत्वपूर्ण छ। कहिलेकाँही यो हुन्छ कि अन्य आधा कुनै प्रकारको शब्द र प्रशंसा गर्दैन, त्यसैले तपाईं यसको पक्षमा हेर्नु पर्छ।
मिसोगिनिस्ट को हो?
दूरीमा कसरी राख्ने
एक पतिलाई आफ्नो मालकिनबाट वार्ड गर्ने उपायहरू
कसरी एउटी केटी लाई प्रमाणित गर्ने कि तपाइँ उसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ
ईस्टरका लागि पास्ताबाट शिल्पहरू: मास्टर वर्ग
पोस्ट डेटिंग, प्रेम, सम्बन्ध
59 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,487 प्रश्नहरू।